Podcast များ | PitePite
ပိုက်ပိုက်တို့ရဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ဘ၀များ ပေါ့ဒ်ကက်စ် (podcast) အစီအစဉ်လေးရဲ့ တတိယပိုင်းကို ဆက်ပြီးနားဆင်ပေးကြပါဦး…. မီးပွိုင့်ထိပ်မှာ စျေးရောင်းပြီး ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အကြောင်းကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပေါ့ဒ်ကက်စ် (Podcast) လေးကနေ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတွေ ရရှိပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေလို့ ပိုက်ပိုက်က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်... #pitepite #podcast #financialliteracy #mobilewallet
ပိုက်ပိုက်တို့ရဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ဘ၀များ ပေါ့ဒ်ကက်စ် (podcast) အစီအစဉ်လေးရဲ့ ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်ပြီးနားဆင်ပေးကြပါဦး…. ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အကျပ်အတည်းကာလမှာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေရလဲ၊ ဘာတွေ ဆုံးရှုံးလိုက်ရလဲ၊ ဘာတွေသင်ခန်းစာရလိုက်လဲ ဆိုတာတွေကို ပြန်လည်မျှဝေထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပေါ့ဒ်ကက်စ် (Podcast) လေးကနေ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတွေ ရရှိပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေလို့ ပိုက်ပိုက်က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်... #pitepite #podcast #financialliteracy #mobilewallet
ပိုက်ပိုက်တို့ရဲ့ ပေါ့ဒ်ကက်စ် (podcast) အစီအစဉ်လေးလာပါပြီ …. ပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့ နေ့ရက်တွေကနေ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အကြပ်အတည်းကာလကို အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်က ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်နေရလဲ၊ ငွေကြေးကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲ ဆိုတာတွေကို ပြန်လည်မျှဝေထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ . . . သူငယ်ချင်းတို့ရေ . . အလုပ်မပျက်ဘဲ ဒီပေါ့ဒ်ကက်စ် (Podcast) လေးကိုနားထောင်ရင်း ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတွေ ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ ပိုက်ပိုက်က ဆန္ဒပြုပါတယ်။